ubomi bamavili amabini
Encyclopedia of transport enamavili amabini
Indlela yokuphucula i-cadence kwibhayisekile?
Udidi: Iluncedo 0
Indlela yokufumana i-cadence yokukhwela kakuhle? Eyona nto icetyiswayo ukuphumeza i-cadence esebenzayo kukuhlala phakathi kwe-80 kunye ne-100 revolutions ngomzuzu. Khumbula ukuba...
Ubuzile: Ungasikhetha njani isihlalo esitofotofo sebhayisekile?
Indlela yokukhetha isihlalo sebhayisekile? Linganisa ububanzi bamathambo akho okuhlala Kodwa khumbula ukuba iisali zifumaneka ngobubanzi obahlukeneyo. Ububanzi besali buya kuxhomekeka...
Ubuzile: Usenza njani isitulo sakho sebhayisekile singonzakali?
Buthini ubude obufanelekileyo besitulo sebhayisekile? Phindaphinda lo mgama ngo-0,88: kuba ngokwezifundo zebhayomechanical ubude obuchanekileyo besali yi...
Impendulo ekhawulezileyo: Yeyiphi imoto Z yamva nje?
I-MOTO Z4 6,4-intshi ye-OLED UMBONISO (19:9) Isisombululo esigcweleyo seHD+ (2.340 x 1.080 pixels) PROCESSOR Qualcomm Snapdragon 675 RAM 4 GB UKUGCINWA 128 GB + microSD ukuya kwi-2…
Amandla okunyovwa asetyenziswa njani ukuhambisa ibhayisekile?
Impendulo: Inkcazo: kukho ukutyekela kwi-pedal ngendlela yepiston, oko kukuthi, "ukunyathela" kwi-pedal ukusuka phezulu ukuya phezulu kwaye ngaloo ndlela utshintshana nemilenze. Okuchanekileyo kukuba...
Ixabisa malini i-inshurensi yesithuthuthu yokuqala?
Yeyiphi eyona-inshurensi yesithuthuthu efikelelekayo kubantu abancinci? Njengakwezinye iiprofayili, eyona inshurensi yesithuthuthu yexabiso eliphantsi yile inikwa ngu...
Zingaphi iiyure aziqeqeshayo umkhweli webhayisikile ngeveki?
Zingaphi iiyure aziqeqeshelwa umkhweli webhayisikile ngeveki? Iiyure ezingama-6-8 ngeveki zinokwanela! Kukho inkolelo ebanzi yokuba nenqanaba elilungileyo…
Yintoni omawuyifumane ngesidlo sakusasa kumdyarho weebhayisikile?
Yintoni yokutya ngexesha lovavanyo lokuhamba ngebhayisikile? Kugqatso Nje ukuba sikhwele ibhayisekile, kuyacetyiswa ukuba sitye ukutya okulula rhoqo ngemizuzu engama-45 okanye ngeyure nganye….
Impendulo ekhawulezayo: Lihlala ixesha elingakanani ilayisenisi yomdyarho weebhayisikile?
Ixabisa malini ilayisensi yomanyano lokuhamba ngebhayisikile? Ilayisensi yomanyano eSpain imalunga ne-120-130 yee-euro ngonyaka kwaye ikuvumela ukuba ube yinxalenye yeli qela kwaye ikunika…
Loluphi uhlobo lweoli olusetyenziswa ziipali zesithuthuthu?
Yeyiphi ioli esetyenziswa ziipali zesithuthuthu? Ndingasebenzisa i-SAE W10 okanye i-oyile yokuhambisa i-80 okanye i-90W okanye i-20W 40 efunxa ukothuka ngaphakathi...
1 2 ... 470 Okulandelayo
Mholo. Igama lam ndinguMichael. I-Mopeds, izithuthuthu, iibhayisekile, ngokuqinisekileyo, i-compact kunye ne-maneuvrable. Kodwa oku akusiyo kuphela induduzo yolu kuthutha, kwaye kwiblogi yam ndiya kukuxelela yonke into malunga nolu hlobo lwezothutho.
Indlela yokubala ubude be-Handlebar ye-MTB?
Yeyiphi ibhayisekile yezemidlalo endiyithengayo ukuqalisa?
Impendulo ekhawulezileyo: Ngawaphi onke amalungu ebhayisekile?
Ngubani owadala isithuthuthu sokuqala?
Eyona mpendulo ingcono: Ngowuphi umdlalo ongcono ukubaleka okanye ukukhwela ibhayisekile?
Kufuneka wenze ntoni xa ibhayisekile imanzi?
Impendulo eKhawulezayo: Yenziwa nini ibhayisekile yokuqala?
© 2022 Ubomi kumavili amabini
Ifowuni | ngathi | Umgaqo-nkqubo wabucala kunye neeKuki
ABANELUNGELO INGQALELO! Zonke izixhobo eziposwe kwisiza ngokungqongqo ngenjongo yolwazi kunye nemfundo! Ukuba ukholelwa ukuba ukuthunyelwa kwayo nayiphi na imathiriyeli yophula ilungelo lakho lokushicilela, nceda uqhagamshelane nathi ngefomu yoqhagamshelwano kwaye izinto zakho ziya kususwa.